Ama-Makeup for umbala wehlobo
Ukwenza umbala wehlobo, njengomthetho, kufanele ube amathoni amakhulu, ngoba i-colorotype ngokwayo ithwala umkhuba obandayo ekubukeni. Ngendlela, lolu hlobo lombala luvame ukubukeka kakhulu.
Iphethini ye-Flower "Summer": izici
Amantombazane asehlobo lwehlobo angaba, bobabili ama-blondes, nama-brunettes anamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka nensundu futhi abe nombono omnene, okhanyayo, obunomthunzi obomvu noma obusedaleni. Abesifazane balolu hlobo lombala banombala wesikhumba ohloniphekile futhi obuncane, kungase kube nama-freckles, kodwa hhayi ngegolide, kodwa i-hue e-brown-brown. Isici esivelele kunazo zonke abameleli bobulili obuhle bohlobo lwehlobo kubhekwa njengomthunzi wezinwele njenge-ashy kanye nokubukeka kwe-"overcast". Ngendlela, lo mbono wommeleli walolu hlobo lombala ungenxa ye-shade yomthunzi ophaphathekile nombala omhlophe we-protein. Ngenxa yalesi sizathu, ukwakheka kohlobo lombala wehlobo kufanele kufake ukukhetha okulungile kwezimpawu zezimonyo.
Yenza uhlobo lombala "Ihlobo"
Umgomo oyinhloko wamantombazane ohlobo lombala wehlobo ukuzama ukwenza ukwakheka kwawo kugcizelele ubufazi futhi "kungabi nethonya elimangalisayo", kufanele ukuthi kugcinwe imigqa elula yesigubhu sebuso.
Ukuqaphela okukhethekile kufanele kukhokhwe ekukhethweni kwesisekelo, ngoba kuyisisekelo sokwenza kahle. Okuhlukile kakhulu kwekhrimu yezwi-imvamisa yehlobo lombala "Ihlobo" yikhilimu ene-pink tinge. Lokhu kubangelwa ikakhulukazi ukuthi amantombazane amaningi "ehlobo" abonakala ngethani lesikhumba elibomvu, okuhambisana nalokho lokhu ukhilimu kuzobukeka kuhle. Uma usebenzisa i-powder noma i-tonal base nge-yellow tint, khumbula ukuthi lokhu kuzokwenza ubumba bakho, kufaka phakathi ukuzenzela, okungokwemvelo. Futhi okubaluleke kakhulu - ukhilimu we-tone okhethiwe kufanele ube nomthunzi opholile.
Ukusebenzisa ukuhlunga, udinga ukulandela umthetho oyisisekelo, othi - ukungcola okuncane, kungcono umphumela. Ngakho-ke, sibeka ama-cheekbones ebusweni ngobuncane, okuzosiza ukunikeza ukubukeka nokubukeka.
Ukuze wenze, ukuhlunga kungcono kusuka othomathikhi obomvu kuya ewayini elibomvu elimnyama. Kodwa i-peach efudumele kanye ne-terracotta shades of blush kulolu hlobo lombala alukhuthazwa.
Into esemqoka ekwenzeni iso ukugcizelela ngobuciko ubuhle nobuhle babo. Ngenxa yalokhu kudingekile ukuthi usebenzise izithunzi ezinama-cool shades. Uma unamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, sebenzisa izithunzi ze-plum-blue, imibala ye-lilac noma yomlotha ohlaza okwesibhakabhaka. Amantombazane anamehlo aluhlaza kufanele asebenzise izithunzi zemibala engapheli, isibonelo, shades kolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka. Abesifazane abamehlo abahlaza okwesibhakabhaka of color-type hlobo balungele shades obunzima green noma umbala lilac izithunzi. Indlela enhle ukuhlanganisa izithunzi. Ukubukeka ngokuphumelelayo kokuhlanganiswa okubomvu-pink nge-mint eluhlaza, igrey epholile nge-lilac noma ama-shades we-amethyst nge-shades ye-champagne. Ukusebenzisa i-mascara nge-eyelashes, kuwufanelekile ukusebenzisa ama-shades wemvelo abukeka ngokuhambisana nomthunzi wamashiya. Ukuze wenze up-up, khetha isidumbu esimnyama esimnyama noma esimnyama. Yongeze nge ipensela noma izithunga. Ngendlela, ngamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, ipensela eluhlaza okwesibhakabhaka noma ephuzi elihle kakhulu, elibomvu ngezinaliti ezinosundu noma eziluhlaza kanye nogrey, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza noma oluhlaza.
I-Lipstick kufanele igcizelele umbala wemvelo wezindebe. Amantombazane anombala wombala ogqamile, kufanele akhethe i-lipstick ye-pink shades. I-shadow shades ye-lipstick ibheka okuhle kuma-brunette anamehlo aluhlaza. Le mibala ihlanganisa obomvu, obomvu obomvu noma obomvu-obomvu. Akunconywa ukuba ukhanyise izindebe zakho ngokugqamile, kuzobukeka kangcono uma ungafaki kahle izindebe zakho, futhi ngepensela embala we-lipstick uzobe uchaza uhlaka lwabo. Ukuqaphela ikakhulukazi amantombazane ombala wehlobo kuwufanelekile ukunikeza umnyama obomvu, i-cherry noma i-lipstick ebomvu. I-shades yama-coral-red, izitini, i-lipstick ye-orange kufanele iguqulwe, ngoba i-colorotype "yehlobo", okokuqala, i-shadow shades nemibala ekwenzeni.
Ukukhishwa kwama-accents: izitayela zokwenza imfashini ye-Fashion Week-2017
I-makeup yobudala inezici zayo siqu
Umphumela we-Galatea: ukuguqulwa - ukuthambekela okusha kwe-makeup
Indlela yokwenza ukwakheka okuhle kwesithombe sonyaka sonyaka omusha: imithetho emine eyinhloko!
Ikhono lokwenza ama-makeup yobudala
Izipho zebhizinisi kwabesifazane
Ithanga elibhaka nge apula kanye omisiwe
Kungani uphupha mayelana nokugeza izitsha?
Iresiphi yokudla kwasekuseni okungavamile: i-punkcake enomnandi nge-corn, ubhekeni kanye ne-avocado
I-Bellflower - Izimila
I-Horoscope yowesifazane-iLibra ngo-Agasti 2016
Ukudla kwemifino yokukhula kwemisipha
Mangaki amahora adlula ukuzalwa kokuqala?